यस्तो लक्षण देखिए हुनसक्छ छालाको क्यान्सर, कारणले हुन्छ छालाको क्यान्सर ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com यस्तो लक्षण देखिए हुनसक्छ छालाको क्यान्सर, कारणले हुन्छ छालाको क्यान्सर ? - खबर प्रवाह
यस्तो लक्षण देखिए हुनसक्छ छालाको क्यान्सर, कारणले हुन्छ छालाको क्यान्सर ?
एजेन्सी । क्यान्सर विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । त्यसमध्ये छालाको क्यान्सर पनि एक हो । छालाको क्यान्सर कसरी हुन्छ त ?
बजेटमा लेख्न छुट्यो, पत्रकारहरुलाई १० लाख ऋण दिन्छौँ : अर्थमन्त्री
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) ले शनिवार चितवन जिल्ला भेला गर्दैछ । असार ७ गते रास्वपा घोषणा गरेका रवि लामिछानेले चितवनलाई आधार क्षेत्र बनाएर पहिलो जिल्ला भेला गर्न लागेको देखिन्छ । भरतपुरको हाकिम चोकस्थित मिड टाउन रिसोर्टमा रास्वपाले जिल्ला भेला गर्न लागेको हो । विज्ञापन भेलाअघि भिडियो सन्देश जारी गर्दै सभापति लामिछानेले भने, ‘कठोर […]
काठमाडौं, २१ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता हरिबोल गजुरेलले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले माग्नेबित्तिकै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिन नमिल्ने बताएका छन् । पत्रकार सँग कुरा गर्दै नेता गजुरेलले भने, “हामी अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यस्त भएकाले त्यतातिर सोच्ने फुर्सद पाएका छैनौं । तर राजीनामा भन्ने कुरा त्यत्तिकै माग्दै हिँडेर त भएन । सत्यतथ्य […]
नेकपा (माओवादी केन्द्र) जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेर पदाधिकारी चयनको गृहकार्यमा जुटेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तत्काल पदाधिकारी चयन गर्न चर्को दवाव आएपछि पार्टी सोको तयारीमा जुटेको हो । आज ११ बजे बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक भोलि मात्र बस्ने भएको छ । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिवेदनमा […]
काठमाडौं । अभिनेता किरण केसीको जन्मदिन समारोह विशेष रह्यो । ललितपुरको इमाडोलस्थित ब्याङ्क्वेटमा उनले बुधबार जन्मदिन पार्टी आयोजना गरे, जहाँ फिल्म, संगीत र उनका हितैषी सहभागी रहे । जन्मदिन जमघटको विशेष आकर्षण चाहिं अभिनेत्री अरुणिमा लम्साल रहिन् । आठ वर्षपछि अमेरिकाबाट फर्किएकी ‘धड्कन’ अभिनेत्रीले मिडियासँग पनि भलाकुसारी गरिन्, अनि आफ्नो आगामी योजना र फिल्ममा हुनसक्ने […]
चितवन । विकास गतिमा तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको भरतपुर महानगरपालिकामा योजना लिएर गएपछि रित्तो हात फर्किनु पर्दैन । महानगरभित्रका वडाध्यक्षहरू योजना लिएर प्रमुखसमक्ष पुगेपछि महानगरको आन्तरिक, प्रदेश वा सङ्घमध्ये जहाँबाट भए पनि स्रोत सुनिश्चित गरेर योजना लिएरमात्रै फर्किन्छन् । गएको पाँच वर्षमा सम्भवतः सङ्घ र प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी बजेट भित्र्याउन सफल हुने महानगरपालिकामा भरतपुर पर्दछ । […]
काठमाडौँ । रामकुमारीले एक सातापछि मात्रै मन्त्री निवास छाड्ने भएकी छन् । सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बिदा भएकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले एक सातापछि मात्रै मन्त्री निवास छाड्ने भएकी छिन् । सामान्यतया मन्त्री पद गएपछि लगत्तै निवास छाड्ने प्रचलन रहेपनि झाँक्रीले भने हप्ता दिनपछि मात्रै मन्त्री निवास छोडेर आफ्नो घर बानेश्वर जाने भएकी हुन् […]